Ihe odide na-adọrọ mmasị m. Nkà nke ndị na-esepụta ụdị mkpụrụedemede pụrụ iche ma nwekwaa ike igosipụta mmụọ bụ ihe enweghị atụ. Ma gịnị mejupụtara leta? Diane Kelly Nuguid chịkọtara akwụkwọ ozi izizi mbụ iji nye nghọta n'akụkụ dị iche iche nke leta na ndenye ihe ederede. Pịa na ya iji hụ echiche zuru ezu. Typography Terminology Glossary Aperture - Mmeghe ma ọ bụ akụkụ nwere oghere na-adịghị mma kere site